မြင်လိုက်တာနဲ့ နှုတ်ဆွံ့အသွားစေမယ့် ဟောလိဝုက ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့. ငယ်ရုပ်မြင်ကွင်းများ - CantWait2Say
မြင်လိုက်တာနဲ့ နှုတ်ဆွံ့အသွားစေမယ့် ဟောလိဝုက ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့. ငယ်ရုပ်မြင်ကွင်းများ
လူတယောက်ကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်ကို နဲ့ ငယ်ဘဝပုံစံတွေကို ခန့်မှန်းတွေးဆကြည့်ဖို့ အတော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလူတွေထဲမှာ တကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးရပါတယ်ဆိုတဲ့ ခန့် ညားချောမာလှပလွန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဟောလိဝုက ကမ္ဘာကျော်ကြီးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ငယ်ရုပ်သွင်ပြင်ကို မြင်ရင် တခြားတယောက်များ လူစားထိုးခဲ့သလားလို့ ထင်မှတ်မှားလောက်စရာ နာမည်ကျော် ဟောလိဝု စတားကြီးတွေရဲ့ ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်ရုပ်တွေကို ဖော်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒီအချိန် သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ် ကမ္ဘာကျော်စတားကြီးတွေ မဖြစ်ခင်က ဆံပင်ပုံစံ ဝတ်စားထားတဲ့ဖက်ရှင်ပုံစံ သွားအထိန်းတပ်ထားတာမျိုးတွေ အတော် ဆန်းဆန်းပြားပြားမြင်တွေ့ရမှာပါ။ အခုချိန်မှာတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ အမျှ ခန့်ညားတောက်ပပြီး ခမ်းနားလှတဲ့ နှစ်ချို့ဝိုင်တွေလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပြီဆိုတာလည်း ထည့်ပြောပါရစေ။ ကဲ စမယ်နော်။
မင်းသားကြီး တွမ်ကတော့ ပျိုမေတို့အကြိုက် ညှို့အားပြင်းမင်းသားအဖြစ် လက်ရှိအချိန်အထိ အချောမပျက် ရုပ်မကျ ဘဲ ဗိုလ်ဝင်ခံတဲ၊ အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ အိပ်မက်သခင်လေးဖြစ်နေဆဲပါနော်။ သူငယ်ငယ်ကကျတော့ သွားကျိုးလေးနဲ့ အတော်ရုပ်ဆိုးတာကလား။
ဟီလာရီဒပ်ဖ်လည်း အခုချိန်မှသာ ကြည့်ကောင်းလို့သာ ကြည့်ကောင်းနေတော့တာ… ကျက်သရေရှိရှိအလှအပကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကကျတော့ ဘယ်လိုရုပ်လေးမျိုးလဲနော်။ ကြောင်ချေးရုပ်ဆိုတာမျိုးလားပဲ။
သွားအထိန်းအမည်းလေးနဲ့ ခန့်ချောကြီး မာ့ခ်ကိုမြင်တွေ့ ကြရမှာပါ။ နည်းနည်းတော့ အသည်းနာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ သူငယ်ငယ်က အဲ့လောက်ကြီးရုပ်မဆိုးခဲ့တော့ ထိုးနှက်စရာမရှိတော့လို့ပါ။
မင်းသမီး ဒရူးဘယ်ရီမိုးက ငယ်ရုပ်မပျောက်တဲ့သူတွေထဲက ထိပ်တန်းလို့် ပြောရမှာပါ။ အသက်လေးအရွယ်လေးရလာတာကလွဲရင် ကလေးလေးလို အပြစ်ကင်းစင်လှတဲ့ မျက်နှာပေါက်က တပုံစံတည်းကိုးဗျ။
ရိုင်ယန်ရဲ့ ငယ်ရုပ်ကိုလည်း ကြည့်ကြပါဦး။ American Idol စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဟိတ်ဟန်အပြည့်နဲ့ တင်ဆက်နေပြီး အမျိုးသမီးထုကိုဖမ်းစားထားပေမဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက မျက်မှန်နဲ့ ဝဝကစ်ကစ်လေး ဆိုတာတော့ ဆက်ညာလို့မရတော့ပါဘူး။
ဘရစ်တနီရဲ့ ငယ်ရုပ်ပုံစံလေးက အတော်လေးအိနြေ္ဒရနေတော့ ပြောစရာမဲ့စေပါတယ်။ သူလည်း ကံအတော်ကောင်းသူလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ငယ်မျက်နှာ နဲ့ ငယ်မူငယ်သွေးက ပေါ်လွင်ထင်ကျန်နေစေပါတယ်။
လူတယောကျကို မွငျလိုကျရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ငယျရုပျကို နဲ့ ငယျဘဝပုံစံတှကေို ခနျ့မှနျးတှေးဆကွညျ့ဖို့ အတျောခကျပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုလူတှထေဲမှာ တကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှေ သဲသဲလှုပျအားပေးရပါတယျဆိုတဲ့ ခနျ့ ညားခြောမာလှပလှနျးလှပါတယျဆိုတဲ့ ဟောလိဝုက ကမ်ဘာကြျောကွီးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ ငယျရုပျသှငျပွငျကို မွငျရငျ တခွားတယောကျမြား လူစားထိုးခဲ့သလားလို့ ထငျမှတျမှားလောကျစရာ နာမညျကြျော ဟောလိဝု စတားကွီးတှရေဲ့ ငယျဘဝဓာတျပုံတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ငယျကြိုးငယျရုပျတှကေို ဖျောသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျနျော။
အဲ့ဒီအခြိနျ သူတို့ငယျရှယျစဉျ ကမ်ဘာကြျောစတားကွီးတှေ မဖွဈခငျက ဆံပငျပုံစံ ဝတျစားထားတဲ့ဖကျရှငျပုံစံ သှားအထိနျးတပျထားတာမြိုးတှေ အတျော ဆနျးဆနျးပွားပွားမွငျတှရေ့မှာပါ။ အခုခြိနျမှာတော့ အသကျအရှယျနဲ့ အမြှ ခနျ့ညားတောကျပပွီး ခမျးနားလှတဲ့ နှဈခြို့ဝိုငျတှလေို ပွောငျးလဲသှားခဲ့ကွပွီဆိုတာလညျး ထညျ့ပွောပါရစေ။ ကဲ စမယျနျော။
မငျးသားကွီး တှမျကတော့ ပြိုမတေို့အကွိုကျ ညှို့အားပွငျးမငျးသားအဖွဈ လကျရှိအခြိနျအထိ အခြောမပကျြ ရုပျမကြ ဘဲ ဗိုလျဝငျခံတဲ၊ အမြိုးသမီးလေးတှရေဲ့ အိပျမကျသခငျလေးဖွဈနဆေဲပါနျော။ သူငယျငယျကကတြော့ သှားကြိုးလေးနဲ့ အတျောရုပျဆိုးတာကလား။
ဟီလာရီဒပျဖျလညျး အခုခြိနျမှသာ ကွညျ့ကောငျးလို့သာ ကွညျ့ကောငျးနတေော့တာ… ကကျြသရရှေိရှိအလှအပကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ ငယျငယျကကတြော့ ဘယျလိုရုပျလေးမြိုးလဲနျော။ ကွောငျခြေးရုပျဆိုတာမြိုးလားပဲ။
သှားအထိနျးအမညျးလေးနဲ့ ခနျ့ခြောကွီး မာ့ချကိုမွငျတှေ့ ကွရမှာပါ။ နညျးနညျးတော့ အသညျးနာဖို့ကောငျးပါတယျနျော။ သူငယျငယျက အဲ့လောကျကွီးရုပျမဆိုးခဲ့တော့ ထိုးနှကျစရာမရှိတော့လို့ပါ။
မငျးသမီး ဒရူးဘယျရီမိုးက ငယျရုပျမပြောကျတဲ့သူတှထေဲက ထိပျတနျးလိျု့ ပွောရမှာပါ။ အသကျလေးအရှယျလေးရလာတာကလှဲရငျ ကလေးလေးလို အပွဈကငျးစငျလှတဲ့ မကျြနှာပေါကျက တပုံစံတညျးကိုးဗြ။
ရိုငျယနျရဲ့ ငယျရုပျကိုလညျး ကွညျ့ကွပါဦး။ American Idol စငျမွငျ့ပျေါမှာ ဟိတျဟနျအပွညျ့နဲ့ တငျဆကျနပွေီး အမြိုးသမီးထုကိုဖမျးစားထားပမေဲ့ ငယျငယျတုနျးက မကျြမှနျနဲ့ ဝဝကဈကဈလေး ဆိုတာတော့ ဆကျညာလို့မရတော့ပါဘူး။
ဘရဈတနီရဲ့ ငယျရုပျပုံစံလေးက အတျောလေးအိန်ဒွရေနတေော့ ပွောစရာမဲ့စပေါတယျ။ သူလညျး ကံအတျောကောငျးသူလို့ ဆိုရမှာဖွဈပွီး ငယျမကျြနှာ နဲ့ ငယျမူငယျသှေးက ပျေါလှငျထငျကနျြနစေပေါတယျ။
ပရိသတ်တွေအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်နေဆဲ့ Ryan Reynold နဲ့ Blake …
ဇိမ်ခံအိမ်သစ်ကြီးထဲမှာ သီးသန့်ပါတီကျင်းပဖို့နေရာထည့်သွားတော့မယ့် Ed sheeran